Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo kula kulmay dhiggiisa Japan. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo kula kulmay dhiggiisa Japan.
By Abdihakim Sharif Ali / August 30, 2019 August 30, 2019
Yokohama(SONNA) – Shalay oo Khamiis ahayd (29 August), Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa intii lagu guda-jiray kaltanka todobaad ee Shir Madaxeedka TICAD ayuu shir doceed la yeeshay dhiggiisa Japan Mudane Tarō Kōno, isaga oo kala hadlay habkii loo xoojin lahaa xiriirka laba geesoodka, waxa uuna bogaadiyay mowqifka Japan ee taageeridda Soomaaliya iyo tubteeda horrumarineed.
Wasiir Cawad ayaa xubin ka ah wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ee ka qeybgalaya Shir Madaxeedka todobaad ee TICAD ee ka furmay Magaalada Yokohama, Japan, oo soconaya inta u dhexeysa 28-30 August.
Wasiirrada Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Japan ayaa waxa ay garwaaqsadeen muhiimadda weyn ee ay leedahay in la furo iskaashi sal ballaaran oo dhinacyo badan leh oo nacfi wadaag u ah labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah.
TICAD waa madal dhinacyo kala duwan oo hoggaamiyeyaasha iyo madaxda dalalku leeyihiin, kana qeybgalaan wakiillada Ururrada caalamiga iyo kuwa gobolka, loogana hadlo horrumarinta Afrika, kulankiisii ugu horreeyay waxa uu ku qabsoomay Japan sanadkii 1993.
Dhagarqabe doonayey inuu Hoobiye ka tuuro Deyniile oo la qabtay
Howlgallo lagu sugayo amniga oo ka socda Gobolka Sh/Dhexe
Boqorka Maleesiya oo la dhigay cisbitaal iyo xiisad siyaasadeed oo ka taagan dalkaasi